विनाबिहे बच्चा जन्माउनु कति सार्थक, कति घातक ?
महाभारतमा कुमारी आमा कुन्ती (शुरसेनकी छोरी) को कथा छ । कुन्तीले ऋषि दुर्वासाको वशीकरण मन्त्र पाएकी थिइन् । त्यो मन्त्रमा यस्तो शक्ति थियो कि कुन्तीले जुनसुकै पुरुषलाई वा देवतालाई चाहिन् भने आफ्नो वशमा ल्याउन सक्थिन् । एकदिन सबेरै कुन्ती बाहिर निस्किएर सुन्दर प्रकृतिको आनन्द लिइरहेकी थिइन् । आकाश गंगामा उदाएको त्यो बिहानी पखको सुरम्य सूर्यले उनको ध्यान खिंच्यो । त्यो सूर्य उनलाई यति राम्रो लाग्यो कि आफैं मोहित भइन् र पृथ्वीमा बोलाइन् ।
वशीकरण मन्त्रको प्रभावले सूर्य ऋषिरुप धारण गरी पृथ्वीतलमा ओर्लिएर कुन्ती सामु आए । सूर्यले नम्रपूर्वक भने, ‘कुन्ती तिमीले मलाई प्रेमले सम्झियौ म आएँ भन म तिम्रो के सेवा गरुँ ।’ कुन्तीले भनिन, ‘हजुरजस्तो महान् र विश्वको सर्वोच्च शक्तिमान् देव अगाडि पाउँदा म अत्यन्तै पुलकित छु ।’ दुवैले प्रेमपूर्वक आलिङ्गन गरेर सशरीर मिलन गरे । वासनातुर आलिङ्गनबाट छुट्टिएपछि कुन्तीलाई आफ्नो गल्तीको महसुस भयो र उनले सूर्यलाई भनिन, ‘सूर्यदेव तपाईं र मेरो मिलनबाट बच्चा जन्मिँदैछ । म कुमारी हुँ र कुमारी आमाको पेटबाट जन्मिएको बच्चा अवैध हुन्छ। समाज यो कुरालाई मान्न तयार छैन । अब म यो समाजलाई मुख देखाउन पनि लायक हुनेछैन भन्नुस् अब म के गरुँ ?’
कुन्तीको विलाप सुनेर सूर्यदेवले आफ्नो कानमा लगाएको कुण्डल दिँदै भने, ‘यो कुण्डल उसको कानमा लगाएर एउटा बाकसमा राखेर बच्चालाई नदीमा बगाइदिनु म उसको रक्षा गर्नेछु ।’ पछि कर्ण जन्मिए र समाजबाट जोगिनका लागि सुर्यले भनेजस्तै गरेर कुन्ती माताले आफ्नो बच्चालाई एउटा बाकसमा राखेर बगाइदिइन् । अस्व नदीबाट बग्दै त्यो बाकस गंगा नदी हुँदै सुतराज्य पुग्यो । कुन्ती शान्त भइन् । कुमारी आमा कुन्ती बाचुञ्जेल कर्णको मायाको घाउले विक्षिप्त भइरहिन् । कर्णले बाचुञ्जेल आफूलाई जन्मजात नदीमा फालिदिएको गुनासो गरिरहे आमासँग । समाजको त्रासले बिहे नगर्दै आमा बनेकी कुन्ती जस्ताले पनि आफ्नो मुटुको टुक्रालाई नदीमा बगाउन बाध्य भइन् । कुन्तीको आँखा त्यही घाउको कारण कहिले ओभानो हुन सकेन । प्रायश्चित जति गरे पनि कुन्तीको त्यो घाउ कहिले पुरिएन ।
भन्नुहोस् अहिले बिहेविना नै सन्तान जन्माउन पाउनुपर्ने कानुन ल्याउन लागी पर्नुहुने कति प्रतिशत महिला कुन्ती बन्न तयार हुनुहुन्छ ? पहिला समाज परिवर्तन गर्नुहोस् ताकि बाँच्न सहज होस् । नत्र कसरी सम्भावना होला पिताविनाको सन्तान लिएर खुसीले बाँच्न ? मेरो शरीर मेरो अधिकार भनेर कुर्लिने नारीहरु तपाईं सहरमा बसेर दुई चार जना पुरुषलाई वशीकरणको मन्त्रमा पार्नुभयो होला तपाईं शिक्षित हुनुहोला तपाईंको मनग्य आम्दानी पनि होला र पुरुष भए पनि ठीक नभए पनि ठीकको अवस्थामा हुनुहोला र भन्दै हुनुहुन्छ कि ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ लोग्नेविना पनि बच्चा पाउने अधिकार पाउनुपर्छ भनेर कुर्लँदै हुनुहुन्छ तर ८१ प्रतिशत जनता गाउँमा बस्छन् र गाउँमा महिलाको हालत के छ त्यो पनि बुझ्नुहोला । विनाबाबुको सन्तान पायौ भने तिमी बाँचेको समाजले तिमीलाई वेश्या भन्छ त्यो सहन तयार छौ ?
यति धेरै अधिकार पनि नखोज कि जहाँ मानव अस्तित्व नै सङ्कटमा परोस् । मेरो शरीर मेरो अधिकार भन्ने निहुँमा के तिमीले नांगो हिंड्न पनि पाउनुपर्छ भनेको हो ? अबोध पशु गाईले पनि आफ्नो योनी पुछारले छोपेको हुन्छ । कहिले याद गरेका छौ ? किराले पनि आफ्नो लाज र संकोच ढाकेको हुन्छ । चरीले पनि लुकेर सहवास गर्छ । भाले फेरिफेरि उड्दैन ऊ । पोथी गौंथली भाले मरेको शोकमा नदीमा डुबेर मर्छ यो कुरा थाहा छ ?
तिमी पुरुषविनाको समाज कल्पना गरिरहेछ्यौ उता, छाउ गोठमा सर्पले टोकेर महिलाहरु मरिरहेका छन् । तिमी बिहे नै नगरी बच्चा पाउनुपर्छ भनी जुलुस निकालिरहेछ्यौ उता गाउँमा नारीलाई बोक्सी भनेर मलमूत्र ख्वाइरहेका छन् । यता काठमाडौंमा तिमी मेरो शरीर मेरो अधिकार भनी रहेछ्यौ उता कागती गाउँमा १२ वर्षकी नानीको बाल विवाहा हुँदैछ । खोइ तिमीले अरु नारीहरुको आर्तनाद बुझेकी !
विनापुरुषको आमा बन्न पाउनुपर्ने अधिकार खोजिरहँदा पुरुषले पनि विनास्त्री बाबु बन्न पाउने अधिकार खोजे भने सेरेगेसी आमा (भाडाकी आमा) बन्न कति गरिब र विपन्न महिला तयार होलान् त्यो पनि ख्याल गर । नयाँ चोलो फरिया फेर्न र मासुभात खान दसैँ नै कुर्नुपर्ने बाध्यता छ गाउँघरमा । त्यतिबेला तिम्रो ‘मेरो शरीर मेरो अधिकारको’ युरोपेली डलरबाट आयातीत नारा के होला त्यो पनि विचार गर ।
कर्णको गुनासो कुन्तीले आजीवन सुन्न परेजस्तै तिम्रो छोराले पनि तिमीलाई आजीवन गुनासो नगरोस् र यदि गुनासो ग¥यो भने त्यसको उत्तर दिन तिमी तयार रहनू । तिमीले बाबु देखाउन सकिनौ भने तिम्रो छोराले तिमीलाई वेश्या भन्छ के तिमी तयार छौ छोराले वेश्या भनेको सुन्न ?
स्त्रीलाई वेश्या बन्न सहयोग गर्छ यो नाराले । तिम्रो छोराले तिमीलाई सोधपुछ गर्छ कसको अबवध पेट बोकेर मलाई जन्मायौ आमा भनेर ? त्यतिबेला के जवाफ दिन्छ्यौ ? मैले भाडाको बाबु प्रयोग गरेर तिमीलाई जन्माए छोरा भनेर जवाफ दिनको लागि तयार हुनू त्यतिबेला । समाज परिवर्तन र महिला अधिकारका नाउँमा नैतिकता नै सङ्कटमा पर्ने मुद्दा किन उठाउनु ? कतिजना महिला भाडाको लोग्ने प्रयोग गर्न राजी छन् त्यसको डाटा छ तिमीसँग ?
पुरुषले पनि भोलि खोज्न सक्छन् पाठेघर भाडामा लिएर सन्तान जन्माउने आमा । पुरुष नचाहने तर सेक्स टोय प्रयोग गरेर यौन आनन्द लिने अनि विर्य बैंकबाट शुक्रकिट किन्ने हैसियतमा कति नेपाली महिला पुगेका छन् त्यसको हिसाबकिताब छ तिमीसँग ? बच्चा जन्माउने अधिकार केवल तिम्रै हो लौ त पुरुष सुक्राणुविना बच्चा जन्माएर देखाउन एक चोटि सकिन्छ भने र पुरुषप्रति यति धेरै घृणा नै जन्मिएको हो भने ।
तिम्रो सपना पूरा गर्न पहिला नेपाललाई शतप्रतिशत साक्षर बनाऊ । बोक्सी आरोप र छाउपडी प्रथा मात्रै अन्त्य गर्ने कोसिस गर । तिमी नै हौ महिनावारी हुँदा छुइ हुन्छ भनेर भान्सामा नजाने एक गिलास पानी सारेर खान पनि लोग्नेलाई वा भाइलाई वा आमाबुबालाई प्रयोग गर्ने । महिनामा पाँच दिन आराम पाइने निहुँमा तिमी नै हौ छुइ प्रथाको विरोध नगर्ने अनि विचरो पुरुषलाई मात्रै गाली किन ? विवाहा प्रथा ठीक छैन भनेर प्रमाणित गर्न खोजेको हो ? मन मिलुन्जेल आनन्द लाग्ने त्यही सेक्स, मन टुटेको अवस्थामा प्रेमीलाई बलात्कारको मुद्दामा जेल हाल्ने र सम्पत्तिमा अधिकार जमाउने खेल मात्रै नखेलिदिए हुन्छ यो समाज सुधार गर्नका लागि ।
पुरुषका छाती मात्रै के ढुंगाबाट निर्मित हुन् ? तिम्रै जस्तो हो नि आँखाबाट बग्ने नुलिलो आँसु पुरुषका पनि । के तिनका आँसुचाहिँ खोल्साको पानी हो र? विनाविवाहा बच्चाको अवधारणाले कानुनी मान्यता पाउनुपर्ने जिकिर गर्नु भनेको स्त्रीले यौन स्वतन्त्रता मागे जस्तो भएन र ? के हाम्रो समाजले आदिम सभ्यता निम्त्याएको हो र ? विनाबिहे विनारोकतोक जुनसुकै पुरुषसँग पनि यौन सम्बन्ध राख्थे आदिम स्त्रीले । बच्चा पाइन् भने कविलाको भिडमा मिसिन्थ्यो । बाबुको खोजी नहुने त्यो आदिम कविला युगलाई फेरि फर्काउनु चाहेको हो र तिमीले ?
रह्यो तिम्रो निजत्वको कुरा तिम्रो अधिकारको कुरा । हो एउटा बच्चा कहिले जन्माउने, कुन उमेरमा जन्माउने, आफूले कहिले र कुन उमेरमा बिहे गर्ने, अर्थात् बिहे पनि गर्ने कि नगर्ने, कोसँग बिहे गर्ने, त्यो तिम्रो निजी कुरा हो । तर तिमी बसेको समाज तिम्रै छायाको प्रतिविम्ब पनि त हो नि । तिमी जे हौ तिम्रो समाज पनि त्यही हो । तिम्रो हरेक आनीबानीको छाया विम्बित हुन्छ त्यहाँ । समाजको सभ्यता भत्काउन तिमी मात्रै तयार भएर पुग्दैन तिमीले अरुलाई पनि तयार गराउन सक्नुपर्छ । विधवा विवाहलाई यो समाजले आजको दिनसम्म स्वेच्छाले स्वीकारेको छैन भने कसरी कुमारी आमालाई समाजले स्वीकृत गर्ला ?
कोमल गुलाफले पनि काँडा साथमा लिएर बाँचेको हुन्छ । र कहिले विद्रोह गरेन उसले काँडासँग । कहिले पनि काँडालाई कुनै गुनासो र आरोप लगाएन किनकि गुलाफलाई गुलाफ नै भएर बाँचिरहनु छ धरतीमा ऐंजेरु भएर होइन । ऐंजेरु भएर बाँच्न चाहने चिलाउनेको ठुटामा उम्रने झारलाई त कौवाले पनि चिथोर्छ । कौवा हुने कि कोइली हुने, कोहिनुर हुने कि कोइला हुने, मयुर हुने कि पातेफिस्टो हुने हात तिम्रै हो ।
यहाँ प्रेम त वर्जित छ भने तिमी कुमारी आमाको कल्पना कसरी साकार गर्न सक्छ्यौ ? कुनै जोडी पार्कमासँगै बसेर गफ गर्दा प्रहरीको लाठी बर्सिन्छ यहाँ । कुनै मायामा परेका जोडी गाउँघरको पानी पँधेरोमा वा चौतारीमा वा मेलापातमा भेटिए भने यही समाज हो तथानाम गाली गर्छन् । पुरुषले स्त्रीलाई छुँदा पनि फलानी केटी त बिग्री भनेर सत्तोसराप गर्ने यो समाजको अगाडि कसरी कुन्तीले उठाएको जस्तो पहाडको पहिरो टाउकोमा बोक्छ्यौ तिमीले ? तिम्रो शरीर तिम्रै अधिकार हो । आफ्नो शरीरमा आफ्नै अधिकार हुन्छ । यो एक्कासौं शताब्दीमा कोही कसैको अधीन र आधिपत्यमा छैन नजिक हुने र बाँधिने त मायाले पो होत होइन र ?
बलात्कारको मुद्दालाई र दोषीलाई सजाय कडा पार्नतिर आवाज उठाउने हो कि बरु । अधिकारको कुरा गर्दा कर्तव्य बोधको कुरा किन छायामा पर्छ ? प्रकृतिले रोपिदिएको तिम्रो कर कोमलतामा, शुभ्र आँखाको भृकुटीमा मायाले कोही हेर्न नआइदिए त्यो मोहनीरुपको महत्व के ? प्रकृति र पुरुष छ र त यो जगत् जगमग छ फेरि किन भन्छ्यौ पुरुष चाहिन्न भनेर । पैंतीस प्रतिशत अशिक्षित जनता छन् नेपालमा त्यो पैंतीस प्रतिशतको आवाजको पनि सुनुवाइ हुनुपर्छ ।
विनाबाबुको परिवार त्यो अपूर्ण परिवार हो । त्यसले बाल मनोविज्ञानलाई नराम्रो असर गर्छ । एउटा बच्चा जब बाबु र आमाको प्रेमबाट प्राप्त जीवन हो भने त्यहाँ बाबु आमा दुवैको महत्व रहन्छ । प्राकृतिक मृत्युबाट खड्किएको अभावलाई समाजले सामान्य रूपमा लिन्छ तर कुमारी आमाबाट प्राप्त स–सन्तानमाथि सधैं प्रश्न आइरहन्छ ।
युरोप अमेरिकामा समेत यो संस्कारलाई राम्रो रुपमा लिइँदैन । जीवनको अन्तिम पलसम्म पनि एउटी आमाप्रति सदैव नकारात्मक धारणा पैदा हुन्छ । वंश परम्परा टुक्राटुक्रा हुन्छ । पुरुष नभए वंश नै नहोला वा नधानिएला त ? हो आज पनि विधवाहरु सम्मानले बाँचेकै छन् । पितृसतात्मक सोचर्लाइ उल्टो घुमाएर मातृसत्ता कायम भयो भने मात्रै यो सम्भावना रहला । वंश परम्परा विस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ यो गर्नलाई ।
यो देशलाई पुरुष प्रधान होइन महिला प्रधान देश बनाउनुस् अनि मात्रै बाबुविनाको सन्तान वैध हुन सक्छन् । तथ्यांकअनुसार १५ र २२ वर्ष उमेर समूहका महिला प्रतिशत पुरुषभन्दा टोटल जनसंख्यामा छ लाख बढी हुन आएको हुँदा अलिकति सामाजिक विचलन आएको हो । र त्यसैको प्रतिफल हो यो नारा पनि  । बहुविवाहलाई अहिलेको कानुन र संविधानले पूर्णवर्जित गरेको छ । पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या धेरै हुनु र बहुविवाह बर्जित हुँदा थोरै विकृति आउँछ नै । तर त्यसलाई शिक्षा, कानुन, आय आर्जन, शसक्तीकरण, अवसरको प्राप्ति, देशको आर्थिक उन्नतिले नियमन नियन्त्रण गर्छ । प्राकृतिक रूपमा हुने सेक्सलाई समाजले नियन्त्रण गर्छु भनेर सम्भावना रहन्न । यस्तो गरियो भने यसले अर्को विकृत बाटो रोज्छ । स्त्री र पुरुष एक अर्काका पर्याय हुन् यदि पुरुषविनाको जिन्दगी स्त्रीले कल्पना गर्छिन् भने यो अप्राकृतिक र अप्रासङ्गिक हो ।